कोरोनाको असर नेपाली औषधि बजारमा, कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बर वृद्धि
४/५ महिनालाई पुग्ने कच्चा पदार्थ छ : नेपाल औषधि उत्पादक संघ
२०७६ फाल्गुण ९ शुक्रबार ०७:००:०० प्रकाशित
काठमाडौं– चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को असर नेपाली औषधि बजारमा पनि परेको छ। कोरोना भाइरसका कारण चीनको उत्पादन र निर्यातमा आएको गिरावटको असर नेपाली औषधि बजारमा परेको हो।
नेपालले चीन र भारतबाट आयात गर्ने औषधिको कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बर बढीले वृद्धि भएको नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले बताए। चीन र भारतबाट आउने कच्चा पदार्थमा ६० देखि १ सय प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।’
नेपालमा उत्पादन हुने औषधिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ ४/५ महिनालाई पुग्ने गरी भन्डारण गरेर राखिएको उनले जानकारी दिए। नेपालले सबैभन्दा धेरै भारत र चीनबाट औषधिको कच्चा पदार्थको आयात गर्दै आएको छ।
भारतबाट ६० र चीनबाट २० देखि ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गरेको महासचिव अधिकारीले बताए। नेपाल कच्चा पदार्थका लागि भारतसँग बढी निर्भर रहे पनि भारत सहित अन्य राष्ट्र चीनसँग ६५ प्रतिशत जति निर्भर छ।
हाललाई कुनै पनि औषधि र कच्चा पदार्थको अभाव नरहेको संघले जनाएको छ। तर कोरोनाको असर लामो समयसम्म रहे औषधि र कच्चा पदार्थ दुवै अभाव हुन सक्ने अधिकारीले बताए।
‘कोरोनाको असर कति लामो समयसम्म पर्ने हो। त्यसमा भर पर्छ। तर सकभर औषधिको अभाव हुन नदिने हाम्रो कोशिस हो,’ उनले भने।
कच्चा पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भए पनि नेपालमा औषधि अभाव नभएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले भने, ‘हामी औषधि व्यवसायी र उत्पादक व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफलमा छौं। अहिलेसम्म औषधिको अभाव छैन। तर कच्चा पदार्थको मूल्यमा भने दोब्बर–तेब्बरले वृद्धि भएको छ।’
कोरोनाका कारण औषधिको अभाव भएको भन्दै भारत सहित अन्य राष्ट्रले औषधिको सूची नै सार्वजनिक गर्दै निर्यात नगर्न त्यहाँको सरकारले निर्देशन दिएको छ। भारतले भने आफूसँग २÷३ महिनालाई पुग्ने कच्चा पदार्थ भन्डार गरेर राखिएको जनाएको छ।
कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले आवश्यक परे औषधिको मूल्यमा पनि वृद्धि गर्न सकिने महासचिव अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘अहिले तत्काललाई औषधिको मूल्यमा वृद्धि भएको छैन। तर आवश्यक परे सरकारले पनि यसमा सहकार्य गर्नुपर्छ।’
नेपालले वर्षेनी ८ देखि १० अर्ब मूल्य बराबरको कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएको छ। नेपाली बजारमा ४५ अर्ब मूल्य बराबरको औषधि खपत हुन्छ। जसमध्ये २५ अर्बको औषधि बाहिरी मुलुकबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
संघका अनुसार नेपाल ४५ प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर छ। सरकारले आफूहरुलाई आधारभूत संरक्षण दिए सस्तो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने सक्ने र ८५ प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
लकडाउनको असर : प्रसूति सेवा लिनेको संख्या टिचिङ र प्रसूति गृहमा उस्तै, अन्य अस्पतालमा घट्यो
कस्तो छ नेपालमा भेटिएका ९ जना कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य?
५. मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले नियमित सेवन गर्ने औषधि बिरामीको घरसम्मै पुर्‍याइदिने